Houko Kuwashima – Cast – MMANIME
Hakuoki – Demon of the Fleeting Blossom – Wild Dance of Kyoto When Chizuru Yukimura comes to Edo-period Kyoto searching for her missing father, she witnessesabloody murder by crazed members of the Shinsengumi - the shogunate's secret police and supposed peacekeepers. Taken into custody after seeing something she wasn't supposed to see, Chizuru finds herself caught up in the group's battles and secrets. Based on the video game by Otomate. ဒီMovie ...
Clannad Movie Clannad Movieဟာ "Clannad"စီးရီးပြီး "Clannad After Story"ရဲ့ အပိုင်း ၁၈ ဝန်းကျင်​ကာလကို ရိုက်​ပြထားတာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ဒီဇာတ်​ကားကို ကြည့်​မယ့်​သူဟာ အနည်းဆုံး "Clannad After Story"ကို အပိုင်း ၁၈အထိ အနည်းဆုံးကြည့်​ပြီးထားဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​။ စီးရီးကို အစအဆုံးကြည့်​ပြီးတဲ့သူဟာ ဒီဇာတ်​ကားကို မဖြစ်​မ​နေ ကြည့်​ဖို့ မလိုအပ်​ဘူးလို့ ကျွန်​​တော်​မြင်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ကြည့်​ချင်​တဲ့သူရှိပါက ကြည့်​ရအဆင်​​ပြေ​စေဖို့ ရည်​ရွယ်​တင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​တာပါ။ ဒီဇာတ်​ကားမှာ စီးရီးထဲက အဓိကဇာတ်​​ဆောင်​ "အိုကဇာခီ တိုမိုယ"ရဲ့ရှု​ထောင့်​ကို အသား​ပေးထားပြီး "The Motion Picture"ဆိုတဲ့ ဇာတ်​ကားရဲ့နာမည်​အတိုင်းပဲ အတိတ်​ကို​ပြန်​​တွေးသလိုနဲ့ ဇာတ်​လမ်းကိုတင်​ဆက်​ထားခြင်းသာဖြစ်​ပါတယ်​။